कैलाली क्याम्पसका विद्यार्थीसँग शुभदिनकाे अन्तर्क्रिया | Suvadin !
कैलाली क्याम्पसका विद्यार्थीसँग शुभदिनकाे अन्तर्क्रिया
शुभदिन मिडिया एण्ड रिसर्च सेन्टरले कैलालीकाे धनगढीस्थित कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेकाे छ। अाठ हजार बढी विद्यार्थी रहेकाे सुदूरपश्चिमकाे अग्रणी कैलाली क्याम्पसमा अध्ययनरत अामसञ्चार तथा पत्रकारिता संकायका विद्यार्थीरू माझ शुभदिनले अन्तर्क्रिया गरेकाे हाे। स्नातक तहमा अध्ययनरत् विद्यार्थीलार्इ शुभदिनका प्रतिनिधि यज्ञराज जाेशीले सहजीकरण गरेका थिए। उनले शुभदिनकाे प्रयाेग विधि र यसबाट विद्यार्थी तथा पाठक कसरी लाभाम्बित हुन सक्छन् ? भनेर जानकारी गराएका थिए।
May 03, 2017 20:11
अन्तर्क्रियाकाे सहजीकरण गर्दै शुभदिनकर्मी यज्ञराज जाेशी र साथमा विद्यार्थी ।
धनगढी, वैशाख २० - शुभदिन मिडिया एण्ड रिसर्च सेन्टरले कैलालीकाे धनगढीस्थित कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेकाे छ।
अाठ हजार बढी विद्यार्थी रहेकाे सुदूरपश्चिमकाे अग्रणी कैलाली क्याम्पसमा अध्ययनरत अामसञ्चार तथा पत्रकारिता संकायका विद्यार्थीरू माझ शुभदिनले अन्तर्क्रिया गरेकाे हाे।
स्नातक तहमा अध्ययनरत् विद्यार्थीलार्इ शुभदिनका प्रतिनिधि यज्ञराज जाेशीले सहजीकरण गरेका थिए। उनले शुभदिनकाे प्रयाेग विधि र यसबाट विद्यार्थी तथा पाठक कसरी लाभाम्बित हुन सक्छन् ? भनेर जानकारी गराएका थिए।
‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकाे प्रवर्धन गर्दै नागरिक पत्रकारितालार्इ महत्व दिएकाे शुभदिन नेपालकाे अाफ्नै सामाजिक सञ्जाल हाे,’ जाेशीले भने, ‘अनलाइनकाे दुनियामा नाैलाे प्रयाेग र नेपाली अवधारणा भएकाले सबै नेपालीले यसबाट लाभ लिन सक्नेछन्।’
अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा विद्यार्थीले शुभदिन मिडियासम्बन्धी विभिन्न जिज्ञासा राख्दै अाफू पनि शुभदिनसँग जाेडिन उत्साहित रहेकाे प्रतिक्रिया दिए।
क्याम्पसका अामसञ्चार तथा पत्रकारिताका उपप्राध्यापक भुवन भण्डारीले शुभदिनले दिएकाे प्लेटफर्म विद्यार्थीहरूले सदूपयाेग गर्ने अाशा व्यक्त गरे। 'कति विद्यार्थीसँग प्रतिभा भएर पनि प्लेटफर्म पाइरहेका हुदैनन्,’ भण्डारीले भने, ‘शुभदिन विद्यार्थी तथा अाम पाठकका लागि पनि लाभकारी छ।’
शुभदिनमा सबैले अाफ्नाे धारणा व्यक्त गर्न सक्छन्। लेखन क्षमतालार्इ प्रवर्धन गर्दै अाएकाे शुभदिनले सामाजलार्इ उत्प्रेरित खबरलार्इ प्राथमिकता दिँदै अाएकाे छ। पछिल्लापटक मात्रै शुभदिनले देशका विभिन्न क्षेत्रमा उत्प्रेरणा फैलाएका ३० जना व्यक्तिकाे प्राेफाइल स्टाेरी बनाएकाे थियाे।